Izindatshana zikaPaige Zandri zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UPaige Zandri
UPaige Zandri, Umqondisi Wenethiwekhi Yommeli e UPriori Legal, unesibopho sokuthuthukisa inethiwekhi yabameli endaweni ngayinye yokusebenza kukaPriori. UPaige ungummeli owake wasebenza e-NYC futhi ungusihlalo obambisene weSolo and Small Firm Practice Committee e-New York County Lawyer's Association. UPaige waphothula eBrooklyn Law School futhi wayengumdlali we-Division I softball e-University of Maryland, eBaltimore County.
Lokho Abadayisi Abadinga Ukukwazi Ngokuvikela Impahla Engokwengqondo
ULwesibili, May 10, 2016 UPaige Zandri
Njengoba ukumaketha — nayo yonke eminye imisebenzi yebhizinisi - sekuthembele kakhulu kubuchwepheshe, ukuvikela impahla ebhaliwe kusuke sekuyinto ephambili ezinkampanini eziphumelelayo. Kungakho wonke amaqembu wokumaketha kumele aqonde izisekelo zomthetho wempahla yokusungula. Iyini Impahla Engokwengqondo? Uhlelo lwezomthetho lwaseMelika luhlinzeka ngamalungelo athile nokuvikelwa kwabanikazi bempahla. Lawa malungelo nokuvikelwa kudlulela ngaphesheya kwemingcele yethu ngezivumelwano zokuhweba. Impahla yengqondo ingaba noma yimuphi umkhiqizo wengqondo